श्री मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ! «
श्री मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् !
Published :6January, 2020 9:30 am
मेष – आफन्तबाट वास्तविक सहयोग होइन अलिअलि कुराको सहयोग पाईनेछ । काममा असह महशुस हुनेछ । प्रयत्न पूर्वक गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । कुनै कुरामा हेलचक्र्याई नगर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा होशियार रहनु होला । विश्वास र भरोसमा काम गर्दा धोका हुनेछ । महत्वकाँक्षी योजनामा हात नहाल्नु होला । भाग्यले कम साथ दिनेछ ।
वृष – काममा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् । शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । सभा सम्मेलन तथा भोज भतेरमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । भाग्य भन्दा कर्ममा जोड दिनु होला । साना तिना समस्यामा नअल्झि काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्यमा थोरै प्रगति हुनेछ ।